David Wexelman မတ်လ 1, 2021 မတ်လ 1, 2021 David Wexelman
After more than 15 years of petitioning and just three weeks ahead of elections, the High Court of Israel ruled that those that had converted to Judaism through reformed and conservative conversions in Israel will be recognized as Jewish by the State. The court also ruled that converts will be allowed to become full Israeli ...
Samuel Gush မတ်လ 1, 2021 မတ်လ 1, 2021 Samuel Gush
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick Dmytro Spilka မတ်လ 1, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 Dmytro Spilka
ငါးမိနစ်အတွင်းလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအားအားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းအင်ရှိသောဘက္ထရီများကိုစက်ရုံတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်လုပ်သည်။ ဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုကအစုလိုက်အပြုံလိုက် EV မွေးစားခြင်းအတွက်လမ်းခင်းပေးနိုင်မလား။ လျှပ်စစ်ယာဉ်များသည်ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကိုဖြေရှင်းရန်လှုပ်ရှားမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မွေးစားရန်အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးတစ်ခုမှာ ...
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick Filomena Mealy မတ်လ 1, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 Filomena Mealy
တက်ကြွသောစစ်မှုထမ်းများသည်လွတ်လပ်သောဖက်ဒရယ်အခွန်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ တစ်ခုမှာ IRS အခမဲ့ဖိုင်ဖြစ်သည်။ ဤပရိုဂရမ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သောအွန်လိုင်းအခွန်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်ပုံစံတင်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့ကိုပေးသည်။ ဒေါ်လာ ၇၂၀၀၀ အောက်ဝင်ငွေရှိသည့်စစ်တပ်ဝင်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများသည် Free File အခွန်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုခုသို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Alibaba နှင့် Pinduoduo တို့သည်စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးရန်ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့်တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုတွန်းအားပေးနေသည်။ လက်ရှိယှဉ်ပြိုင်မှုသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထွက်ပေါ်လာသောစားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဖြူးရေးအကျပ်အတည်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
တရုတ်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်တိုင်းပြည်အတွင်းလွှမ်းမိုးမှုကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးပမ်းစဉ်အလီဘာဘာ၏လုပ်ငန်းများနှင့်၎င်း၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ငန်းများသည်မကြာသေးမီလများအတွင်းပြင်းထန်စွာစစ်ဆေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အစီရင်ခံစာအသစ်တစ်ခုအရ MYBank သည်…
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖေဖော်ဝါရီလချီကာဂိုဝယ်ယူမှုမန်နေဂျာအညွှန်းကိန်း (PMI) က ၅၉.၅၊ စျေးကွက်မျှော်မှန်းချက်ထက် ၆၁.၁ ထက်နိမ့်သည်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ၆ နှစ်၊ အညွှန်းကိန်း၏ 59.5 တိုးချဲ့ထင်ဟပ်အထက် 61.1 ဖြစ်ပါတယ်
သတင်းများအရဥရောပဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်နှင့်ဂရိဗဟိုဘဏ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yannis Stournaras မှဥရောပဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့်ကြွေးမြီများကို ၀ ယ်ယူရန်တိုးမြှင့်သင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရိုင်ယန်တီအန်ဒါဆင်ရေးသားသည့်စာအုပ်ကို“ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဟယ်ရီဖြစ်လာသောအခါ - လိင်ပြောင်းလဲမှုအခိုက်အတန့်အားတုံ့ပြန်ခြင်း” စာအုပ်ကိုအမေဇုံမှမကြာသေးမီကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤစာအရေးအသားအရစာအုပ်သည်မရရှိနိုင်ပါ။
God rules the world. God will not compromise on truth. Truth is one of the names of God. Peace is another name of God. Every day God displays his humility. In humility God gave to…
Kurti သည်ယခု Desi ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယကူတီကိုစတိုင်လ်ဖြင့်ဝတ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူ updated နေဖို့ရှိသည်။ Kurti သည်ဖက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အွန်လိုင်းစျေးကွက်၏အားသာချက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သင်၏အင်တာနက်သည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ၊ ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ သင်၏သတင်းစကားကိုမျှဝေခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုရောင်းအားအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည်။ သို့သော်လူများစွာအတွက်…
အိမ်အတွက်ပရိဘောဂအသစ်များကို ၀ ယ်ခြင်းသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်၊ အထူးသဖြင့်စျေးဝယ်ထွက်လိုသောသူများအတွက်။ Houston TX ရှိပရိဘောဂဆိုင်များသည်သင်၏အိမ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောပရိဘောဂများကိုရှာဖွေခြင်းအတွက်ကမ္ဘာအနှံ့ကျော်ကြားသည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်သန်းပေါင်းများစွာသောကိရိယာများရရှိနိုင်သည့်အခါ၊ Twitter feeds တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာရှာရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်သမားများအတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်စျေးနှုန်းတင်ခြင်း - ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများအကြောင်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းလွှမ်းမိုးထားသည့်နည်းပညာသတင်းများဖြစ်သည်။ ဂါးဒီးယန်းက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ငါတို့အားလုံးသည်နောက်သို့မောင်းသူများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ နီးကပ်နေပုံရသည်။